एकअर्काप्रति विश्वस्त छैनन् ओली–दाहाल ! कहाँ अल्झियो गाँठो ? – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / एकअर्काप्रति विश्वस्त छैनन् ओली–दाहाल ! कहाँ अल्झियो गाँठो ?
प्रचण्डलाई इतिहास नै मेटेर अघि बढ्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका मुद्दाको सम्बोधन कसरी हुने ? आफू र माओवादीबाट आएका नेताको भविष्य संकटमा पर्ने कि नपर्ने ? लगायतका विषयमा विश्वस्त हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
एमालेमा पनि सिधै पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिँदा पार्टी झन कमजोर हुन सक्ने भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यसो नगर्न चर्को दबाब परेको एमालेकै नेताहरु बताउँछन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पछिल्लो दिनमा बाक्लै वार्ता भए पनि एकतामा कसरी जाने भन्नेमा अझै पनि केही अविश्वास र समस्या देखिएको दुवै पार्टीका नेताहरुले स्वीकार गरेका छन् ।
त्यसका लागि एकताका विभिन्न मोडालिटीमा पनि छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
पछिल्ला दुईदिनसम्म लगातार छलफलमा जुटेका ओली र दाहालले आज पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक समेत बोलाएका छन् ।
दुई नेताको उपस्थितिमा हुने बैठकमा एकता संयोजन समितिलाई पार्टी एकता प्रक्रियाका केही विषय टुंगो लगाउने जिम्मा दिने तयारी भएको बुझिएको छ ।
नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेताले पनि पौडेलले जस्तै दुवै नेताको व्यवस्थापन र पद नै अहिलेको मुल गाँठो भएको बताउँछन् ।
एकताको हल्ला चलेको निर्वाचनअघि नै हो तर निर्वाचन सकिएको डेढ महिना बितिसक्दासमेत एकताले गति लिन नसक्नुको मुल कारण नै यही भएको उनको धारणा छ ।
यसबीचमा तीन पटक पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक र आधा दर्जन पटक एमाले–माओवादी शीर्ष नेतृत्वको बैठक बसिसकेको छ ।
एमालेका ती नेता भन्छन्, “पदमै अल्झिएको हो कुरा । त्यो बाहेक अर्को कुरा नै छैन । प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै दिन तयार छैनन् ओलीले पनि प्रचण्डलाई सजिलै अध्यक्ष दिन तयार देखिएका छैनन् ।”
उनले पद व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छर्लङ्ग भइसक्दासमेत दुनियाँसँग शीर्ष नेताले नै नक्कली कुरा गरेको भन्दै रोष प्रकट गरे ।
“दुई नेताबीच पद बाँडफाँडको विषयमा त्यसरी खुलेर पनि कुरा भएको छैन,” स्रोतको दाबी छ ।
त्यसो त चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्छौं भनेर जनमत लिएर आएको भए पनि दुई पार्टीले पार्टी एकतालाई गति दिन सकेका छैनन् । “दुवै पार्टीलाई स्वार्थले गाँजिरहेको छ,” ती नेताले भने, “स्वार्थ र आफ्ना मानिसको व्यवस्थापन नमिल्दासम्म पार्टी एकताले गति लिँदैन ।”
त्यसो त पछिल्लो समय विचार–सिद्धान्तलाई बेमेलको कसी बनाइए पनि सिद्धान्त के हुने भन्ने विषय प्रवेश नै नभएको एमालेकै कतिपय नेता बताउँछन् । “सबैलाई आफ्नै चिन्ता छ, आफू बनेपछि सिद्धान्त आफैँ बन्छ भन्ने भावना देखिएको छ,” एमाले अर्का नेता बताउँछन् ।
७ माघ २०७४, आईतवार ०८:२४
Previous: घोराही उपमहानगरकाको ११ वटा वडाको भवन निर्माण र मर्मत हुने
Next: आन्दोलनका क्रममा भएका फोहरलाई सरसफाई गर्दै